Yakadzama Mashini Vatengesi uye Fekitori - China Yakadzama Mashini Vagadziri
PP rakarukwa Bags Kupisa Kutema Muchina
Iyo inopisa yekucheka muchina yekugadzira PP yakarukwa mabhegi, zvinotora kuramba kudziyisa maalloys waya kutema PP jira mipumburu kuita zvidimbu.
PP rakarukwa Bags Cold Kutema Muchina
Iyo inotonhora yekucheka muchina yekugadzira PP yakarukwa mabhegi, zvinotora chopu banga kutema PP jira mipumburu kuita zvidimbu.
Iyi mesh bhegi yekucheka muchina (kupisa kupisa) inogadzirwa neakawanda epamberi tekinoroji, otomatiki zvinhu-kushandisa, otomatiki kudyisa, kupisa kupisa uye otomatiki kuverenga etc.
Iwo map rakarukwa mabhegi wokusonesa, kusona pasi pePP machira zvidimbu kuumba mabhegi. Kukura kwayo kwekushandisa: kraft mapepa mabhegi, mabhegi efetiraiza, mabhegi ekudhinda mavara, masaga akasanganiswa, makemikari mabhegi, mabhegi eupfu, mabhegi emupunga, mabhegi ezvipfuyo uye mamwe mabhegi akarukwa etc.
Iyo inozivikanwa seye flexo yekudhinda muchina kana bhegi kune bhegi yekudhinda muchina we PP rakarukwa mabhegi, inogona kudhinda kraft mapepa mabhegi, mafotireza mabhegi, anoumbwa nemabhegi, makemikari mabhegi, hupfu mabhegi, mupunga mabhegi, chikafu mabhegi uye mamwe akarukwa mabhegi etc.
Mberi Uye Back Kudhinda Muchina
Iyo inozivikanwa seye flexo yekudhinda muchina kana bhegi kune bhegi yekudhinda muchina wePP rakarukwa mabhegi, ndeyedu patent chigadzirwa kudhinda mabhegi kumberi uye kumashure imwe nguva, mativi maviri pamwechete. Inogona kupurinda kraft bepa mabhegi, mafetiraiza mabhegi, anoumbwa nemabhegi, makemikari mabhegi, hupfu mabhegi, mupunga masaga uye chikafu mabhegi etc.
PP rakarukwa Bags Kuunganidza Machine
Muchina wekubatsira wePP dzakarukwa mabhegi kudhinda muchina, inogona kushandiswa kuunganidza mabhegi mushure mekudhinda. Inosanganisira zvikamu zviviri, kuunganidza chikamu uye kuisira chikamu.
Mabhegi kurongedza chigadzirwa chakafananidzwa chekambani yedu yakarukwa mabhegi michina. Iyo yakanyatsogadzirirwa iyo inononoka bhuku kurongedza kumhanya mumusika wekunze uye kunze kwenyika.
PP rakarukwa Bags Ultrasonic Kuiswa chisimbiso Machine
Ultrasonic yekuisa chisimbiso muchina ndeye inoenderana chigadzirwa chekambani yedu yakarukwa mabhegi michina.Iyo inokodzera 35% zvemukati zvakasikwa zvakasanganiswa zvakagadzirwa nylon machira, dzakarukwa micheka, isina-yakarukwa machira, TC, TR, PP, PU, ​​PVC, PE + aluminium, PE + bepa, pfapfaidza namira donje uye thermoplastic nhete chikamu etc.
Otomatiki Kucheka & Sewing Machine
PP dzakarukwa Bags Kugadzira Machine, kucheka nekusona. Iwo musanganiswa wakasanganiswa wakasanganiswa wekucheka muchina uye wekusonesa. Inochengetedza basa uye inoita mabhegi kuburitsa zviri nyore.
Otomatiki Kucheka Uye Kudhinda Muchina
PP rakarukwa Bags Kugadzira Machine, kucheka nekudhinda. Ndiyo muchina wakabatanidzwa wakabatanidzwa wekucheka muchina uye wekudhinda. Inochengetedza basa uye inoita mabhegi kuburitsa zviri nyore.
Otomatiki Kucheka & Kusona & Kupisa Kunopisa Yakasanganiswa Muchina
PP dzakarukwa mabhegi kugadzira muchina, kucheka, kusona uye kupisa-kunyauka. Muchina wakasanganiswa wakasanganiswa wekucheka muchina, wekucheka uye unopisa-unonyungudika muchina Inochengetedza basa uye inoita mabhegi kuburitsa zviri nyore. Inokodzera BOPP mabhegi ekudhinda, maparera firimu mabhegi uye mapepa epurasitiki anoumbwa nemabhegi nezvimwe.